Ihlabathi libhiyozela uNyaka oMtsha wamaTshayina ka-2018 ngesimbo | Iindaba Zokuhamba
NgoLwesihlanu ophelileyo uluntu lwaseTshayina lubhiyozele unyaka omtsha, ngakumbi i-4716 ngokwekhalenda yayo, eyona holide ibalulekileyo yesintu kwilizwe laseAsia. Kwi-2018, umqondiso wenja ngoyena mntu uphakathi, kuthiwe ubuhle njengokuthembeka, uvelwano, isibindi kunye nobukrelekrele.
Nangona uphawu ngalunye lunonyaka owahlukileyo, kwi2018 isiTshayina siqikelela unyaka wethamsanqa lomntu kunye nobungcali ngokukodwa kwabo bantu banamandla amakhulu okuziqhelanisa neziganeko zobomi.
Imibhiyozo yoNyaka oMtsha waseTshayina iya kuhlala kude kube nge-2 kaMatshi, iyonke iyintsuku ezili-15 apho, ngokwenza amasiko, iintsapho zamaTshayina zenza utshintsho ukusuka kunyaka wenkuku yomlilo ukuya kunyaka wenja yomhlaba ukuze kutsalwe ulonwabo kunye novuyo. okuhle kodwa.
E-Spain, uluntu lwaseTshayina lukhulu kwaye izixeko ezinjengeBarcelona, ​​iMadrid okanye iValencia nazo zilungiselela ukubhiyozela kwaye zamkele uNyaka weNja.
1 Wonwabile 4716!
2 Ubhiyozelwa njani uNyaka oMtsha e-China?
3 Kwaye emhlabeni?
4 Ngaba uNyaka oMtsha waseTshayina ubhiyozelwa eSpain?
Ikhalenda yaseTshayina isekwe kubalo lwakudala lwexesha ngokujonga izigaba zeNyanga ukumisela imijikelezo yezolimo, injini yezoqoqosho kumaxesha amandulo.
Ngokwale khalenda, ukuvela kwenyanga yokuqala yinto ehambelana notshintsho lonyaka kunye nemibhiyozo, into edla ngokwenzeka phakathi kukaJanuwari 21 noFebruwari 20.
Ubhiyozelwa njani uNyaka oMtsha e-China?
E-China, yiholide yesizwe apho uninzi lwabasebenzi luneholide yeveki. UNyaka oMtsha uphawulwa ngokudibana kosapho, kubangele izigidi zabantu abafudukayo kwilizwe.
Ekuqaleni komnyhadala, iintsapho zamaTshayina zivula iifestile neengcango zamakhaya abo ukukhupha zonke izinto ezimbi ezize nonyaka ophelileyo. Okwangoku, kwiindawo ezivulekileyo, izitrato zigcwele izibane ezibomvu kwaye kukho imikhosi yeempungutye neengonyama ukugxotha imimoya emdaka. Ukongeza, kumcimbi wonyaka wenja, zonke iintlobo zezinto ezinxulumene nenani lazo zithengiswa ezivenkileni.
Izenzo zesiko zigqitywa ngumthendeleko weelanteni eziphoswa esibhakabhakeni ukuze zikhanyise njengoko ziphuma kunye nomboniso womlilo. Nangona kunjalo, eBeijing kulo nyaka akuyi kubakho ziqhushumbisi okanye kuqhume umlilo njengoko umthetho opasisiweyo ubathintelayo kwindlela yering eringi ngenxa yongcoliseko oluphezulu.
Eminye iminqweno yalo mbhiyozo kukuba akukho mntu uhlala ethetha ngezinto ezidlulileyo, kuba kuthathwa ngokuba kutsala ithamsanqa kwaye abantwana abohlwaywa, kwaye banenkululeko ethile yokwenza ububi.
Umfanekiso | ILondon ngeSpanish
Ukufika koNyaka oMtsha waseTshayina u-2018 kwabhiyozelwa kwiindawo ezininzi zeplanethi. E-United States, umboniso womlilo waququzelelwa kwisiXeko saseNew York, nangona ukuqala konyaka omtsha kwabhiyozelwa nase Seattle, San Francisco okanye Washington.
ILondon ibanga ukuba sesona sixeko sibhiyozela uNyaka oMtsha waseTshayina ngaphandle kwezwekazi laseAsia. Kukho izinto ezenziwayo kwi-West End edlula eChinatown ukuya eTrafalgar Square, ephethe ezona ziganeko zibalulekileyo. Imisebenzi yasimahla ehlelwe nguMbutho waseTshayina waseChinatown waseTshayina kunye nokutsala amakhulu eendwendwe minyaka le.
Amanye amazwe abhiyozela uNyaka oMtsha waseTshayina yiPhilippines, iTaiwan, iSingapore, iCanada okanye iOstreliya, phakathi kwamanye.
Ngaba uNyaka oMtsha waseTshayina ubhiyozelwa eSpain?
ISpain ikwabandakanyeka kwiminyhadala yokubhiyozela uNyaka waseTshayina u-2018. Umzekelo, IMadrid iququzelele imisebenzi yazo zonke iintlobo de kube ngu-28 kaFebruwari ukuze iindwendwe nabantu balapha bafunde ngakumbi kwaye bonwabele inkcubeko yaseTshayina. Amakhonsathi, iintlanganiso, ukungqungqa kunye neendlela zendlela yokutya zezinye zeziganeko ezicwangcisiweyo.
Unyaka Omtsha waseTshayina ubhiyozelwa e-Barcelona ngemingcelele, imiboniso yomculo kunye nokutya okwenziwe ngenkcubeko kunye nenkcubeko kwiiNkampani zePaseo de Lluís. Ezinye izixeko ezinje ngeGranada, iPalma okanye iValencia ziya kuthi ziququzelele imisebenzi enxulumene noMnyaka weNja yoMhlaba.
Ke naphina apho ukhoyo, uqinisekile ukufumana indawo oza kuthatha inxaxheba kuyo kwimibhiyozo yoNyaka oMtsha kwaye ube nexesha elimnandi!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » ngokubanzi » Izaziso » Ihlabathi libhiyozela uNyaka oMtsha waseTshayina ka-2018 ngesitayile
Amaqhinga ama-8 okufumana ihotele efanelekileyo
Iingcamango ezili-10 zokubaleka ngePasika